Jabuuti oo Soo Deynaysa Muwaadin Hore Somaliland Ugu Dhiibtay | Gabiley News Online
Xukuumada Somaliland ayaa la sheegay inay dalka ku soo celinayo muwaadin Somaliland u dhashay oo dalka Jabuuti muddo ugu xidhnaa dembi la xidhiidha argagaxiso, ka dib markii madaxda Somaliland kala xaajoodeen dhigooda Jabuuti.
Dowladdaha Somaliland iyo Jabuuti ayaa kala saxeexday heshiis dhanka amniga ah gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah aragagixisada iyo isku gudbinta dambiilayaasha maadama ay xudduud wadaagaan.
Muwaadin Cabdillahi Sheekh oo muddo ku xidhnaa Jabuuti ayaa Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi 18 June, 2020 sheegay inuu caddaaladdaro ka tirsanayo xukuumadihii hore, isla markaana arrintiisa kala hadlay madaxda Jabuuti, waxaanu yidhi.
“Waxaa jira nin muwaadina oo reer Somaliland ah oo todoba sano waddanka Jabuuti ku xidhnaa, oo arrimahaasi falalka argagixisada u xidhnaa oo ka tirsanaya caddaaladaro xukuumaddihii xukuumaddan ka horeeyay, waanu kala hadalay dowlada Jabuuti faylkiisi dib ayaa loo furayaa hadii ILLAAHEY yidhaahdo.” Ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi.